Muqdisho: Shirkii amniga oo dhamaaday - BBC News Somali
Muqdisho: Shirkii amniga oo dhamaaday
Magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu soo gebagabeyay shir ammaanka Soomaaliya looga hadlayey oo mudo afar maalmood ah socday, shirkaas oo ay ka qeyb galeen dad la sheegay in ay aqoon u leeyihiin sugidda amniga oo ka kala yimid gudaha iyo dibadda Soomaaliya.
Gebagabada shirweynaha qaran ee amniga ayaa laga soo saaray talooyin ku aadan sida dib loogu habayn karo hay'adaha nabadgalyada iyo ciidamada, iyo sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa sharciyada arrimahaasi khuseeya.
Talooyinka ka soo baxay shirka waxaa ka mid ahaa, dejinta iyo sharci haga hay'adaha amniga, dibu-habeynta iyo tayeynta hay'adha amniga, abuurida xiriirka iyo wadashaqaynta ciidammada iyo qaybaha bulshada, in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya hay'adaha amniga iyo waaxyada cadaaladda, dhaqan celinta maleeshiyaadka iyo hub ka dhigistooda, iyo xoojinta xiriirka wadashaqaynta dawladda dhexe, dawlad goboleedyada, iyo maamulada.
Ra'isul wasaare C/wali Sheekh Axmed oo soo xiray shirwaynaha, ayaa ka dhawaajiyay sida loogu baahanyahay in talooyinka la soo jeediyay loo badalo si ficil ah, isagoo ku baaqay in laga wada qayb galo fulintooda.
Intii u socday shirwaynaha qaran ee amniga waxa ay dawladda Soomaaliya dilal qorshaysan ku waysay labo xildhibaan oo la kala oran jira Isxaaq Maxamed Cali Riino iyo Cabdi Casiis Isaaq Mursal, iyadoo la dhaawacay xildhibaan kale, waxaana muuqata loolanada adag ee xukuumadda Soomaaliya ay ka wajahayso xasilinta dal ay sanado badan ka socdeen colaado wajiyo kala duwan lahaa.
Dagaal culus oo ka dhacay Fiidoow
Shirweynaha Ammaanka ee Muqdisho
Shaqaale Qaramada Midoobay oo lagu dilay Soomaaliya